Fil d'actualités du 18/07/2019
18/07/2019 - 10:00 : TSARA HO FANTATRA:Ny andro anio faha 18 jolay dia andro maneran-tany natokana ho fatsiarovana an'i Nelson Mandela izay nametraka tantara ny fampihavanana an'izao tontolo izao.
Archive du 20190401
TIMK25 Avaradrano Hahazo depiote roa no fanamby
Nisy ny toromarika nomena teo anatrehan’ny tsy fitovian-kevitra nampifanolana ireo lohandohan’ny mpisorona ao anatin’ny Antoko Tiako I Madagasikara Avaradrano
Ramboasalama Emilien Efa nanompo, ary mbola hanompo tanindrazana
Natolotra tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny Espace Mahatazana eny Fort Voiron ny sabotsy 30 martsa lasa teo ny kandidan’ny TIMK25 ao amin’ny Boriborintany faha-4,
Fiaramanidin’ny Air Mauritius Saika niharan-doza 15 minitra niaingana
Taorian’ny lozam-piaramanidina mahatsiravina nahazo ny Boeing 737 Max an’ny Kaompania Ethiopian Airlines nahafatesana olona 157 ny 10 martsa teo, dia ny an’ny Air Mauritius indray no nisy fahavoazana ny sabotsy teo, saingy tsy nitera-doza aloha.
Vono olona feno habibiana Ny akanjony no namadika ilay jiolahy
Efa maty eritreritra tanteraka ny olona sasany amin’izao fotoana izao.
Ora iray ho an’ny tany Nisongadina ny fiarovana ny tontolo iainana
Hetsika fanao isaky ny faran’ny volana martsa ny fankalazana ny ora iray ho an’ny tany ho fiarovana ny tontolo iainana.
Fivalanan-drano Azo havadika ho angovo hanampiana ny herinaratra
Efa azo havadika ho angovo azo havaozina entina hanampiana ny famatsiana herinaratra eto amintsika ny fivalanan-drano na ny pipy ankehitriny.
Ligin’ny volley-ball Analamanga Nosokafana omaly ny taom-pilalaovana 2019
Nosokafana omaly alahady 31 martsa 2019 tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano ny taom-pilalaovana 2019 ho an’ny ligin’ny taranja volley-ball eto Analamanga ka ny filohany,